Hello Nepal News » युनाइटेडमा काभानीले पाए ७ नम्बर जर्सी : गर्लान् त न्याय ?
युनाइटेडमा काभानीले पाए ७ नम्बर जर्सी : गर्लान् त न्याय ?
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडमा हालै अनुबन्ध भएका उरुग्वेन फरवार्ड इडिन्सन काभानीले क्लबको आइकनिक ७ नम्बर जर्सी पाएका छन् । फ्रि एन्जेन्टमार्फत् निःशुल्क युनाइटेडमा अनुबन्ध भएका ३३ वर्षीय काभानीले युनाइटेडको बहुचर्चित ७ नम्बर जर्सी लगाउनेछन् ।
७ नम्बर जर्सी युनाइटेडमा त्यसबेलाका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगाएका थिए । त्ययसता ७ नम्बर जर्सी थुप्रै खेलाडीले लगाएपनि सो जर्सीका खेलाडी कोही पनि चम्केनन् । फ्रेन्च क्लब पिएसजीसँग सम्झौता सकिएपछि काभानी प्रिमियर लिग क्लबमा पुगेका हुन् ।
युनाइटेडले अफिसियल रूपमा काभानीले नयाँ सिजनमा ७ नम्बर जर्सी लगाउने बताएको छ । युनाइटेडमा ७ नम्बर जर्सी पूर्वस्टारहरू जर्ज बेस्ट, डेभिड बेकहम, एरिक क्यानटोना र रोनाल्डोले लगाएका थिए । उनीहरूले सो जर्सी लगाएको समयमा चमत्कारिक प्रदर्शन गरेका थिए ।
रोनाल्डोले सन् २००९ मा युनाइटेड छाडेपछि ७ नम्बर जर्सी एन्जल डि मारिया, मेम्फिस डिपे र एलेक्सिस सान्चेजले लगाए पनि उनीहरूले आइकनिक जर्सीमाथि न्याय गर्न सकेका थिएनन् ।
प्रकाशित मिति २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:२७